ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးရာတွင် ထားရှိရမည့် စိတ်သဘော | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 14/02/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးလွဴျခင္း.	5 Comments
ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့သည် ဓမ္မဟောင်း ကာလက ဖော်ပြ ခဲ့သော အကြောင်း အရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဓမ္မသစ် ကာလနှင့် မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ယုံကြည်သူအချို့ ပြောဆိုနေကြ သည်ကို မြင်တွေ့ ကြားသိနေ ရပါသည်။ ကျေးဇူးတော် ကာလ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအရာကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နေ သူများ ကိုပင်လျှင် ပညတ် တရား၏ အောက်သို့ ပြန်လည်ရောက် ရှိနေကြ ကြောင်း ဟောပြော ဝေ ဖန်နေကြ သည်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် သမ္မာကျမ်းစာမှ အမြင်တစ်ချို့ ကို ဖော်ပြလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးရန် လိုအပ်ပါသနည်း။
ကျမ်းစာမှ ဖော်ပြသော ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့ဆိုသော စကားလုံးကို ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့။ ဟေဗြဲဘာသာ စကားတွင် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဟု ခေါ်သော စကားလုံးသည် ma`aser ဟု ခေါ်ပြီး ဘာသာပြန်ရသော် တစ်ဆယ် (၁၀) (သို့မဟုတ်) ဆယ်ပုံတစ်ပုံ ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကာလတွင် ထိုစကားလုံးကို ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “dekate” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words. ကို ရေးသားသော W. E. Vines သည် ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့ နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ ရေးသားထားပါသည်။ ဟေဗြဲ ရး၄-၉ တွင် မေလခိဇေဒက် မင်းကြီး နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဖော်ပြထားရာတွင် (၁) အာဗြဟံသည် ထိုမင်းကြီး မေလခိဇေဒက်ကို ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့ ပေးခဲ့သည် (ကမ္ဘာဦး ၁၄း၂၀)။ (၂) ထိုမေလခိဇေဒက် သည် လေဝိအမျိုး မဟုတ်ပါ။ ထိုသူ ကိုယ်တိုင်က ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်များကို ခံစားထားရသူ အာဗြဟံထံမှ ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့ကို ရယူခဲ့သည် သာမက အာဗြဟံကို ကောင်းကြီးပေး ခဲ့ပါသည်။ (၃) သေတတ်သော လေဝိလူတို့သည် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို ရယူခံစား တတ်ကြသည်။ သို့သော် မေလခိဇေဒက်သည် သေသည်ဟူ၍ ကျမ်းစာတွင် မှတ်တမ်းမရှိခဲ့ချေ။ (၄) အမှန်တကယ်တွင် လေဝိအမျိုးသားများသည် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ကို အာဗြဟံအားဖြင့် ပေးပြီးသူများ ဖြစ်သည်ဟူ ထိုကျမ်းပိုဒ်က ဖော်ပြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို အာဗြဟံ ပေးသောအချိန်က လေဝိလူတို့ သည် အာဗြဟံ၏ ကိုယ်တွင် ရှိနေသူဟု ထိုဟေဗြဲကျမ်းက ဆိုထားလေသည်” ဟု ရေးသား ပြောဆိုခဲ့ဘူး ပါသည်။
ထိုအကြောင်းအရာများကို သင့်အားပြောပြသောကြောင့် ငြီးငွေ့မသွားစေချင်ပါ။ သို့သော်လည်း သင့်ကို သေချာစွာ သိနားလည်စေချင်သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အခြေခံအားဖြင့် ပြော ဆိုနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း မှ ၁၄ ခုမြောက် သော အခန်းကြီးကို ဖတ်လိုက်ပါ။ ပထမဦးဆုံး ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့ပေးသော အာဗြဟံ၏ အကြောင်းအရာကို သိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အာဗြဟံသည် ထိုဒေသမှ ဘုရင်များနှင့် စစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်သောအခါ သိမ်းယူရမိသော ပစ္စည်းဥစ္စာအများအပြားကို ရရှိခဲ့ပါ သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က အာဗြဟံကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်ကို အခန်းငယ် (၁၈) တွင် ဖတ်ရှုရပါ လိမ့်မည်။
အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သော ရှာလင်မင်း ကြီး မေလခိဇေဒက်သည်လည်း မုန့်နှင့် စပျစ်ရည်ကို ဆောင်ခဲ့ပြီး လျှင် ကောင်းကင်မြေကြီးအရှင်၊ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောဟု အာဗြံကို ကောင်း ကြီးပေး၍ သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏လက်၌ အပ်နှံတော်မူသော အမြင့် ဆုံးသော ဘုရားသခင် လည်း မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း ဟု မြွတ်ဆို၏။ အာဗြံသည်လည်း ဥစ္စာရှိမျှတို့ကို ထိုမင်းအား ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ လှူလေ၏။ (ကမ္ဘာဦး ၁၄း၁၈-၂၀)
အာဗြဟံ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးသော မေလခိဇေဒက်ဆိုသည်မှာ သမ္မာကျမ်းစာက သတ်မှတ်သည်မှာ ခရစ်တော် အတန်း အစား တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို ဟေဗြဲ ၅း၆ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ
ထိုသို့နှင့် အညီကျမ်းစာတစ်ချက်လာသည်ကား သင်သည် မေလခိဇေဒက် နည်းတူ ထာဝရ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည် ဟု လာသတည်း။ (ဟေဗြဲ ၅း၆)
ဤအရာသည် မှတ်သားထားူရန် အလွန်အရေးကြီးသော သမ္မာကျမ်းစာ ဖော်ပြချက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာတွင် ပထမဦးဆုံး ဖော်ပြထားသော အချက်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်ဟု သတ်မှတ်ရသည့်အကြောင်းမှာ ပညတ်တရား မရှိသေးသော်လည်း ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ် တည်ရှိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။ မေလခိဇေဒက်ကို ပထမဦးဆုံး ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးခဲ့သည်မှာ ပညတ်တရား မပေါ်ထွန်းမှီ အနှစ် ၄၀၀ ခန့် ကတည်းက ဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသည့် မေးခွန်းမှာ “မေလခိဇေဒက်ကို ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးရန် အာဗြဟံကို မည်သူက ပြောခဲ့ပါသနည်း”။ အာဗြဟံကို တစ်စုံတစ်ယောက် က ပြောဆိုခဲ့သောကြောင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ရှုလေ့လာသောအခါ အာဗြဟံသည် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးခံရသောကြောင့် လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ သင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပညတ်တရားကို သွန်သင်ဟောပြောပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံ တစ်ယောက်မျှ ထိုနေရာတွင် ရှိနေပါသလား။ သူ၏ ကိုယ်ပိုင် ဆန္ဒနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များပေါ်တွင် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။ ကျွန်တော်ယုံကြည်သည့်အရာတစ်ခုမှာ အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း မြတ်နိုးကိုးကွယ်မှု ပြုသည့်အခါ ကျွန်တော်တို့၏ အမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းကြီး ဟူသည့် ယေရှု ခရစ်တော်ကဲ့သို့သော မေလခိဇေဒက်အားဖြင့် ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်း လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို ခံယူကျင့်သုံး နေပါသည် ဟူသော ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ခံယူကျင့်သုံးရန် လျော် ကန်ညီညွတ်သည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်မိပါသည်။
“သင်တို့အဘ အာဗြဟံသည် ငါကြွလာမည့် အချိန်ကာလကို မြော်မြင်ခြင်း ငှါ အလွန်အလိုရှိ၏။ မြင်ရသော အခါ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ယောဟန် ၈း၅၆)
အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရာတွင် မည်သည့် ဖိအားမျှ မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်နိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ထိုအကြောင်းအရာကို နောင်လာ နောက်သားများ သိရှိနိုင်ရန် မှတ်တမ်းတစ် ခုအဖြစ် သတ်မှတ် ထားရှိခဲ့ဟန် ရှိပါသည်။ အာဗြဟံသည် ထိုသို့ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေး၍ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ကြီးမားသော လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်ခဲ့ပါမူ ယခုကဲ့သို့ ဓမ္မသစ်၊ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းစာများတွင် ယခုကဲ့သို့ အရေးတစ်ယူ ရေးသားဖော်ပြမည် မဟုတ်ဟု ထင်မြင် ယူဆမိပါသည်။ ဘုရားသခင်ဘက်မှ အာဗြဟံ၏ ယခုကဲ့သို့ ဆယ်ဘို့ တစ်ဖို့ ပေး၍ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်၍ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှောက်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ် ကျေနပ်အားရမှု ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အာဗြဟံကို ပိုမို၍ ကောင်းကြီးများနှင့် ပတ်ရစ်မစခဲ့ပါသည်။
ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် သခင်ယေရှုကိုယ်တော် မိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာ
ကိုးကွယ်သောသူ မှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို နံဝိညာဉ်နှင့် လည်းကောင်း၊ သစ္စာနှင့် လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရမည့် အချိန်ကာလသည် လာ၍ ယခုပင် ရောက်လျှက် ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသို့ ကိုးကွယ်သော သူတို့ကို ခမည်းတော်သည် အလိုရှိတော်မူ၏။ (ယောဟန် ၄း၂၃)
ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင် လိုချင်သော ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်လိုပါက ကျွန်တော်တို့၏ အပြင်သဏ္ဍာန် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းက အရေးမကြီးပါ။ စိတ်ဝိညာဉ်ထဲက ဝတ်ပြုကိုးကွယ် မှုပြုရမည်ဖြစ်ပြီး သမ္မာတရားကို အခြေခံပြီး ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုမေလခိဇေဒက် ယဇ် ပရောဟိတ်ကြီးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဆာလံကျမ်းများ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်ကိုလည်း ကြည့်ရှုလိုပါသေးသည်။
တန်ခိုးတော်ပြသော နေ့ရက်ကာလ၌ ကိုတော်၏ လူတို့သည် သန့်ရှင်းသော တန်ဆာကို ဆင်လျက် ကြည်ညိုသော စေတနာစိတ်ရှိ၍ လူပျိုတော်တို့သည် နံနက်ဝမ်းထဲက ထွက်သော ဆီးနှင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ ပါလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားက သင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ထာဝရ ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု ကျိန်ဆို၍ နောက်တစ်ဖန် စိတ်ပြောင်းလဲခြင်း ရှိတော်မမူ။ လကျ်ာတော်နားမှာ ရှိသော ဘုရားရှင်သည် အမျက်တော် အချိန်ကာလ၌ ရှင်ဘုရင်တို့ကို ဒဏ်ခတ် တော်မူမည်။ (ဆာလံ ၁၁၀း၃-၅)
အထက်ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသခင် တန်းခိုးပြသော နေ့ရက်အခါ ရောက်လာခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်၏ လူတို့သည် မိမိတို့၏ စိတ်စေနာအလျှောက် (မည်သူ၏ သွေးဆောင်မှုမျှမရှိဘဲ စိတ်လိုလက်ရ) ဘုရားသခင်ထံ ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း တွင်ဖော်ပြ ထားသည် မေလခိဇေဒက်နှင့် ပတ်သတ်သော အခြားသော အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုအရာထဲမှာပင် လွတ်လပ်စွာ စိတ်လိုလက်ရ ကိုးကွယ်သောသူများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဖော်ပြထားကြောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိရပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်၏ လူများသည် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပင် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဝိညာဉ်ထဲက ဝတ်ပြုကိုးကွယ် နေသူများ ဖြစ်ဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ မေလခိဇေဒက်ကို ဖော်ပြသော ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ပညတ်တရားမရှိဘဲ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု ပြုခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြနေပါသည်။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် ကားတိုင်ပေါ်တွင် လူတို့အပြစ် အတွက် အသက်ကို စတေးခံသောအခါ မည်သူတို့၏ တိုက်တွန်းသွေးဆောင်မှု မပါဘဲ လွတ်လပ်စွာပင် ထိုအမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဖတ်ရှု တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုအရာသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် ပုံသက်သေ ပြု ဆောင်ရွက်ချက် များပင် မဟုတ်ပါလား။
ပညတ္တိကျမ်း၊ အနာဂတ္တိကျမ်းများကို ဖျက်ပယ်ခြင်းငှါ ငါသည်ဟု မထင် ကြနှင့်။ ဖျက်ပယ်ခြင်းငှါ ငါလာသည်မဟုတ်။ ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ ငါလာ သတည်း။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီး မပျက်စီးမှီ တိုင်အောင် ပညတ္တိကျမ်း၌ အငယ်ဆုံးသော စာလုံးဗိန္ဓုတစ် လုံးမျှ ပြည့်စုံခြင်းသို့ မရောက်မှီ မပျက်စီးရ။ ထို့ကြောင့် အကြင်သူသည်။ အငယ်ဆုံးသော ပညတ်တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်၍ သူတစ်ပါးတို့ အားလည်း ထို့အတူ သွန်သင်၏။ ထိုသူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ အငယ်ဆုံသောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ (မဿဲ ၅း၁၇-၁၉)
ခရစ်တော် ယေရှုသခင် မိန်တော်မူသော စကားတော်အရ ပညတ်တော်များကို ပြည့်စုံစေရန်ပင် လာရောက်သည်ဟု ပြောထားပါသည်။ ထိုပညတ်တော်များကို ယခုအခါ ကျွန်တော်တို့ ၏ နှလုံးသား များ ပေါ်တွင် ရေးသားထားသည် မဟုတ်ပါလား။ ထိုအရာသည် ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားပြီးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပညတ်တရား အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်သွားပြီး၊ လှည့်ကြည့်စရာ မလိုတော့ပါ ဟူ၍ မဆိုလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် မြေကြီးပေါ်တွင် အသက်ရှင်နေသ၍ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် အကြံအစည်တော်ထဲတွင် အသက်ရှင်နေရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရန်အတွက် ဖိအားမပါ၊ အတင်းအကျပ် မဟုတ်ဘဲ မိမိ၏ စိတ်အလိုအတိုင်း အသက်ရှင်ရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ပညတ်တရားတွေက တော့ ရှိနေမည်သာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအရာများသည် ကျွန်တော်တို့ကို ဖိအားပေးဘို့ မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ လျှောက်လှမ်းသော လမ်းများသည် မှားနေသည် (သို့) မှန်ကန်သည် စသည်ဖြင့် သိရှိစေရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းရာတွင် မိမိတို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်ထဲက သမ္မာတရား၏ လမ်းပြမှုများဖြင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာသည် ပိုမို ကောင်းမွန်သော လမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
တမန်တော် ယောဟန်က ပြောသည်မှာ
အကြောင်းမူကား ပညတ်တရားတော်ကို မောရှည် လက်တွင် ပေးတော် မူ၏။ ကျေးဇူးတရားနှင့် သစ္စာတရားမူကား ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဖြစ်သ တည်း။ (ယောဟန် ၁း၁၇)
ယခုလောက် ဖော်ပြခဲ့သည်ကို သင်သေချာစွာ ဖတ်ခဲ့ပြီဆိုပါက ကျွန်တော်တို့၏ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း များသည် မည်သည့် ပညတ်တရားကိုမျှ အခြေမခံဘဲ ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်နှလုံးထဲက လွတ်လပ်စွာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုများသည် ကျမ်းစာနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း သင်သိမြင်နိုင်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယခုအခါ ပဋိညာဉ်သစ်ဖြစ်သော ကျေးဇူးတရား ၏ လက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ နောက်သို့ တစ်စိုက်မတ်မတ် လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နိုင်ရန် လွယ်ကူလှပါသည်။ အတင်းအကျပ် ဖိအားများ ရှိမနေပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ပညတ်တရားက ကိုင်စွဲလှုပ်ရမ်းနေသော ရုပ်သေးရုပ်လေးများ မဟုတ်ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ပထမဆုံးသော ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ဖတ်ပြီးနောက် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့သည် ပညတ်တရား မရှိမှီကတည်းက စတင်တည်ရှိနေ သည်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပေမည်။ ထို့နည်းတူ ပဋိညာဉ်ဟောင်း၏ နောက်ဆုံးစာအုပ် တွင်လည်း ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးရန် ဆိုသည့် အကြောင်းအရာသည် အတင်းအကျပ်မဟုတ်။ ကောင်းကြီး ပေးချင်သော ဘုရားသခင်က ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက် တိုက်တွန်းပြောဆိုခြင်း တစ်ခုသာ ဖြစ်ပေသည်။ ဖိအားတစ်ခုအနေဖြင့် အတင်းအကျပ် လုပ်ဆောင်ခြင်း မဟုတ်ပါဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများကို ဆုံးမသွန်သင် သည့်အခါ သူတို့၏ မာကျောနေသော နှလုံသားများကို အပြစ် ဖော်ပြပြောဆိုပြီး ဆုံးမလေ့ ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ပြောင်းလဲတတ်ပါသလား။ နှုတ် ခပတ်တော်သည် မနေ့၊ ယနေ့၊ နောင်ကာလ မပြောင်းမလဲသော ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို စိတ်ဝိညာဉ်ထဲက ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်နေ သောသူများ အပေါ်တွင် တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲသော နှလုံသား ရှိမည်ဟု သင်ထင်နေပါသလား။ မာလခိ ကျမ်းစာထဲမှ ဖော်ပြချက်များသည် ဆယ်ဖို့ တစ်ဖို့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံသား စိတ်နေသဘောထားများ အပေါ်တွင် များစွာ အခြေပြုထားပါသည်။
မာလခိကျမ်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဤနေရာတွင် အများအပြား မပြောလိုပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဤဆောင်းပါးကို ရှည်လျားစွာ မရေးလိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မာလခိကျမ်း တစ်စောင်လုံး ကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုလေ့လာပါရန် သင့်ကို တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
မာလခိ ၁း၂-၁၄ ကို ဖတ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလ လူမျိုးများကို လွန်စွာ အမျက်ဒေါသထွက် အပြစ် တင်နေသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအရာသည် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ တစ်ခုတည်း သာမကပါ။ သူတို့၏ စိတ်နေသဘော ထားများ အလွန်ဆိုးရွားနေသည်ကို အရှင်မြတ်က ဖော်ပြနေ ပါသည်။ သူတို့၏ စိတ်နေ သဘောထားများသည် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာ တွင် ရောင်ပြန် ဟတ်နေသည်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နေရ ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် နှုတ်ခပတ်တော်ကို လေ့လာကြည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကိုးကွယ်သည်ဟု ဆိုရာတွင် ကျွန်တော်တို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ် ထားသည့် စိတ်နေသဘောထားများက ဖေါ်ပြဖွင့်လှစ် နေသည်ကို တွေ့မြင် နိုင် ပါသည်။
မဿဲ ၁၅း၄-၇ တွင် ယေရှုက ပြောခဲ့သည်မှာ
“ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ကား၊ မိဘာကို ရိုသေစွာပြုလော့။ အကြင် သူသည် မိဘကို နှုတ်ဖြင့် ပြစ်မှား၏။ ထိုသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို ခံစေဟု လာသတည်း။ သင်တို့မူကား၊ အကြင်သူသည် ကိုယ့်မိဘကို၊ သင်တို့ အသုံးရနိုင်သမျှသော ငါ၏ဥစ္စာသည် အလှူဝတ္ထုဖြစ်စေဟု ဆို၏။ ထိုသူသည် ကိုယ်မိဘကိုပင် ရိုသေစွာမပြုရဟု ဆို၏။ ထိုသို့ သင်တို့သည် အဆက်ဆက်ခံသော နည်းဥပဒေအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ကို ပယ်ကြ၏။ လျှို့ဝှက်သောသူတို့ ဟေရှာယ သည် သင်တို့ကို ရည်မှတ်လျက် ဤလူမျိုးသည် နှုတ်နှင့် ငါ့ထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ နှုတ်ခမ်းနှင့် ငါ့ကို ရိုသေကြ၏။ စိတ်နှလုံး မူကား ငါနှင့် ဝေးလှ၏။ (မဿဲ ၁၅း၄-၇)
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်တွင် လူတို့၏ စိတ်နှလုံးကို အဓိက ဖော်ပြနေသည်။ မိဘကို ရိုသေစွာပြုပါ ဟု နှုတ်ခပတ်တော်က သွန်သင်ချက်အပေါ် အပေါ်ယံစိတ်နှလုံးက ရိုသေသလို၊ ချစ်သလို ဖေါ်ပြနေသော် လည်း အမှန်တကယ်မချစ်။ မိခင်၊ ဖခင်များက တစ်စုံတစ်ရာကို သားသမီးများထံ တောင်းခံလာသောအခါ ထိုသားသမီးက မိဘကို မပေးချင်သဖြင့် “အမေ၊ အဖေ – ကျွန်တော်မှာ ရှိတဲ့ အဲဒီဥစ္စာလေးကို ဘုရားသခင်ထံ လှူထားပါတယ်” ဟု ပြောဆိုတတ်သည်။ ထိုအခါ မိဘများက မတောင်း ယူတော့ချေ။ ထိုသို့ဖြင့် မိဘများကို ရိုသေဟန်ပြုနေကြသော်လည်း အမှန်တကယ်မဟုတ်ချေ။ ဘုရားနှင့် ပတ်သတ်လာ လျှင်လဲ ထိုကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ချေတော့သည်။ အပေါ်ယံက ရိုသေသလို ချစ်သလို၊ စိတ်နှလုံးနှင့် ကိုးကွယ် သယောင် ပြုနေကြသော်လည်း စိတ်ထဲက အမှန်တကယ် မပါရှိကြချေ။ ဗိမ္မာန်တော်တွင် ထည့်လှူရမည့် အလှူ ငွေများကိုလည်း ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြနှင့် ငြင်းပယ်လေ့ ရှိကြသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ရိုသေ လေးမြတ်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့မြင်နေရပါသည်။
မာလခိကျမ်းကို ပြန်ကြည့်လျှင် ထိုသူတု့ိသည် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ထားရခြင်းကို အလွန် စိတ်ပင်ပန်းစရာ အကြောင်းအရင်း တစ်ခုဟု ထင်မြင်ပြီး ထိုအရာကို ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးစားအားထုပ်မှု မပြုလုပ် ကြတော့ပေ။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်ကို ပေးရာတွင် မကျန်းမာသော သိုး၊ ကျိုးပဲ့နေသော တိရစ္ဆာန်များကို လည်းကောင်း၊ ခိုးယူထားသော အရာများကို လည်းကောင်း၊ ရောင်းမကုန်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို လည်းကောင်း၊ မပြည်စုံသော အလှူဝတ္ထုများကို လည်းကောင်း ဘုရားသခင်ကို ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့၏ စိတ်နှလုံးအခြေအနေများကို ဖော်ပြခဲ့ကြသည်ကို မာလခိတွင် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုအခြေအနေမျိုးကို ကျွန်တော်တို့၏ ခေတ်ကာလတွင်လည်း တွေ့နိုင်သည် မဟုတ်ပါလော။ ကျွန်တော် တို့၏ စီးပွားရေး မှာ သူတို့ကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ မဟုတ်သော်လည်း စိတ်နှလုံးမှာ မူကား သူတို့နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်လေတော့သည်။ လုံးဝခားနားမှု မရှိကြပါ။ ယနေ့ခေတ် အသင်းတော် တော်တော်များများတွင် ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးကို ရှိနေပါသည်။ လူတော်တော်များများက “ထိုအရာတွေ (ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့) လုပ်ဆောင်ရင် ဘာအကျိုးရှိလို့လဲ” ဟု တွေးမြင် နေကြသည်။ “အသက်တာတွင် ပိုကောင်းလာသည်မရှိ” ဟု တွေးထင်နေကြသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် လုပ်ဆောင်မှု ထိုလုပ်ဆောင်မှုကို အနှစ်သာရ မပါဘဲ အပေါ်ယံသာ လုပ်ဆောင်ကြလေတော့သည်။ ဘုရားကို အကျန်၊ အကျိုး၊ မပြည့်စုံ သောအရာများကိုသာ ပေးကြလေတော့သည်။ အချို့က အမှန်တကယ် ပေးလှူကြ သော် လည်း မှားယွင်သော စိတ်နှလုံး များဖြင့်သာ ပေးလှူကြလေတော့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရာတွင် မိမိ၏ စိတ်သက်သာမှုနှင့် အခြေအနေကိုသာ စိတ်ကူးပြီး စိတ်လုပ်ဆောင်လေတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ကိုးကွယ်ရာဟူသမျှသည် မိမိ စိတ်သက်သာမှုထက် ဘုရားသခင် ကြိုက် နှစ်သက် ဝမ်းမြောက်ဘို့ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သင့်သည် မဟုတ်ပါလား။
မာလခိကျမ်း အခန်းကြီး (၃)သည် ကျွန်တော်တို့နှင့် ပိုမိုရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်သော ကျမ်းပိုဒ်များ ရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို မည်ကဲ့သို့ လက်ခံ ရယူရ မည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်က ဤနေရာတွင် လက်တွေ့ဆန်သော သဘောဖြင့် ရေး သား ဖော်ပြထား ပါသည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ တစ်ခုတည်းသာမက လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများကိုလည်း ကွယ်ကာမှုပြုကာ မင်္ဂလာရှိသူအဖြစ် ချီးမြှောက်မည်ဟု ဖော်ပြ ရေးသားထားသည်မှာ အားရစရာ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ (မာလခိ ၃း၁၀-၁၂ ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။)
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို အမှန်တကယ် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများကို ပေးသနားချင်ပါသည်။ ထိုကောင်းကြီး မင်္ဂလာသည် ကျွန်တော်တို့နှင့် ထိုက်တန်မှုပင် မရှိပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင် ပေး ချင်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်သင့်သောအရာများကို လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန် ဝတ္တရားများ ရှိနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ လမ်းတော်တွင် လျှောက်လှမ်း မည် ဆိုပါက ဘုရားသခင်ထံမှ အကျိုးရလဒ်များ ရမည်မှာ မလွှဲမသွေ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဆက်လက်၍ ပဋိညာဉ်ဟောင်းကို ဆက်လက်ကြည့်ပါဦးမည်။ ပဋိညာဉ်ဟောင်းသည် ပဋိညာဉ်သစ်နှင့် စပ်ဆက်မှု ရှိနေကာ ထိုအရာများသည် ပဋိညာဉ်သစ်၏ အရိပ်သဖွယ် ဖြစ်နေပါသည်။ ယခု တရားဟောရာ ကျမ်း အခန်းကြီး (၂၆) တစ်ခန်းလုံးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
တရားဟော ၂၆း၁-၁၁ ကိုဖတ်ကြည်လျှင် မိမိတို့ကို ပေးတော်မူသော ဂတိတော် တိုင်းပြည်သို့ ရောက်လျှင် အဦးသီးသော အသီးကို နာမတော်တည်ရာ အရပ်သို့ ယူဆောင်လာရမည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။ ထို့နောက် ယဇ်ပရောဟိတ်ကို ထိုလှူဘွယ် ရာများကို ပေးရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ယနေ့ခေတ် အခါတွင် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့၏ ယဇ်ပရော ဟိတ်အကြီး ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။
ဟေဗြဲ ၃း၁ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ
ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်ဘုံနှင့် စပ်ဆိုင်သော ခေါ်ဘိတ်တော် မူခြင်း ကျေးဇူးကို ခံရသောသူ၊ သန့်ရှင်းသော ညီအကိုတို့ ငါတို့ဝန်ခံသော တမန်တော်နှငု့် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းတည်းဟူသော ယေရှု၏အကြောင်း ကို စေ့စေ့ ဆင်ခြင်ကြလော့။ (ဟေဗြဲ ၃း၁)
ယေရှုသည် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်မြတ်နိုးသော နှုတ်ခပတ်တော် က ဖေါ်ပြနေပါသည်။ ထိုသခင်ကို ကျွန်တော်တို့၏ အဦးသီးသော အသီးအနှံများဖြင့် ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ကြပါစို့။ ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ လှူဘွယ်ရာများကို ယဇ်ပရောဟိတ်ထံ ယူဆောင် မလာမှီ ထိုသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ ယဇ်ပရောဟိတ် ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံကြပါစို့။ ကျွန်တော်တို့သည် ယခင်ကပင် ထိုသခင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဝန်ခံပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ သည် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ထိုသခင်၏ ကောင်းမြတ်ကြောင်း ကို ကြေငြာသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုကဲ့သို့ ပေးလှူနိင်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည် ထိုသခင်ထံမှ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော။
တရားဟော ၂၆း၁၂-၁၅ ထိ ဖတ်ရှုလိုက်သောအခါ
ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို ဘုရားသခင်ထံ ယူဆောင်လာသောအခါ မိမိတို့၏ ပေးလှူမှုများသည် ဘုရားသခင်ကို မိန့်ကြားတော်မူ သည့်အတိုင်း နာခံမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြောင်း ဖော်ပြရပါမည်ဟု ရေးသားထားပါသည်။ ထိုအရာကို လုပ်ဆောင်သောအခါ ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်မှု ပြုရန်လိုအပ်ပါ သည်။ စိတ်မသက်မသာဖြင့် ပြုရမည့် လုပ်ဆောင်ချက် မဟုတ်ပါ။
တရားဟော ၂၆း၁၆-၁၉ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ အခန်းငယ် (၁၆) ကိုသေချာဖတ်ကြည့်ပါ။ “ယခု စီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှအတိုင်း ကျင့်ရမည်ဟု သင်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရား မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ကျင့်ဆောင့်ရမည်” ဟုရေးသားထားပါသည်။ NIV ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ “Carefully observe them with all your heart and with all your soul” (ထိုအရာများကို သေချာစွာ ဂရုစိုက်၍ သင်၏ စိတ်ဝိညာဉ်ထဲက အကြွင်းမဲ့ ဆောင်ရွက်ရမည်) ဟုဖေါ်ပြထားသည်ကို ဖတ်ရပါသည်။ အပေါ်ယံ လုပ်ဆောင်ရမည်မဟုတ်ပါ။ တာဝန် ဝတ္တရားအရ လုပ်ဆောင်ရမည်မဟုတ်ပါ။ ပညတ်တရားအရ လုပ်ဆောင်ရမည်မဟုတ်ပါ။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရမည်ဆိုပါက ကျွန်တော်တို့၏ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးကမ်းခြင်းသည် အထက်တွင် ဖေါ်ပြ ရှင်းလင်းခဲ့ သကဲ့သို့ပင် မိမိ၏ သဘောဖြင့် စိတ်လိုလက်ရ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကျေကျေ နပ်နပ် ပေးရ မည်သာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုသာ လိုချင်ပါသည်။ မာလခိကျမ်းတွင် ဖော်ပြသော အကြောင်းအရာများသည် ဘုရားသခင်ဘက်က ကြည်မည် ဆိုပါက အလွန်ဝမ်းနည်းဘွယ်ရာ အကြောင်းများဖြစ်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို အပေါ်ယံသာ လူကြည့်ကောင်းအောင်သာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေကြသည်။ အမှန်တကယ် စိတ်ထဲက လာသော အကြွင်းမဲ့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုမျိုးမဟုတ်ပါ။ သင့်အသက်တာတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုး မဖြစ်စေရန် ဂရု စိုက်၍ ပေးလှူမှုများ၊ ဆယ်ဘို့ တစ်ဘို့ ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ကြပါ ရန် မေတ္တာရှေ့ ထားကာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ကြွယ်ဝစွာ ခံစားရရန် ရည်ရွယ်လျက် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ (အားလုံးအပေါ် တွင် ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။) အာမင်
← ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်း
ဖြေရှင်းရန် မဖြစ်နိုင်သော ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ခြင်း →
5 comments on “ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးရာတွင် ထားရှိရမည့် စိတ်သဘော”
thangnaing on 07/03/2013 at 4:51 PM said:
လီေဟာင္ on 18/08/2016 at 8:14 PM said:
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပါ ၊ ျပန္လည္သိခြင့္ရအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေ၀ငွသက္ေသခံသြားတဲ့ ေရးသားသူအေပၚမွာလည္း ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါ။
sawsin on 10/03/2013 at 1:22 AM said:
piaohsiu wu on 11/03/2013 at 12:03 PM said:
so thank you God and saya family ”’
God bless saya family””””
lun on 11/03/2013 at 10:32 PM said:
Amen!Thank you saya.
LeaveaReply to piaohsiu wu Cancel reply